Musqulaha Waa La Dayactiri Karaa !!! Musqusha Dadku Way Ogaan Doonaan
Bogga ugu weyn / blog / Musqulaha Waa La Dayactiri Karaa !!! Musqusha Dadku Way Ogaan Doonaan
2021 / 01 / 11 Qoondayntablog 9120 0
Iskuulka Ganacsiga Musqusha 2020-11-27
Musqusha iyo jikada, oo la oran karo waa meesha ugu isticmaalka badan guriga. Musqusha marka loo eego, musqusha waa jawi aad u adag. Qurxintuna aad ayey muhiim ugu tahay qoys walba, haysashada musqusha dhalaalaysa, nadiif ah oo nadiif ah waxay noo keeni kartaa nasasho weyn. Maanta, aan ka hadalno habka dayactirka musqusha. Kuwa raba inay dayactiraan musqulaha mustaqbalka dhow, ha moogaan!
Dayactirka Musqusha Qoondaynta
Qurxinta musqusha badanaa waxay kuxirantahay marmarka gidaarka iyo alaabada nadaafadda laba dhinac oo habka dhismaha ah waa qiyaas ahaan: foorarida darbiyada → saqafka ti gogosha dusha sare → rakibidda musqusha, weelka lagu dhaqo, tubbada → rakibidda tubooyinka isku xidha → rakibidda laambadaha, saldhigyada, muraayadaha → rakibidda baararka shukumaanada iyo qalabka kale ee qalabka.
Geedi socodka socodka ee nadaafadda Ware
1 / Dooxada weelka: geli balaastiigga ballaarinta si adag u foorari, sudho qafiska tuubbada saxanka oo ku rid weelka santuuqa si aad u ogaato heerka, biyaha waxay ku xiran yihiin saxanka si uu u toosiyo, ka dibna wuxuu ku xiran yahay biyaha.
2 / Qubeyska: Tallaabooyinka rakibaadda saxda ah waa in la rakibo qubayska marka hore ka dibna la rakibo biyaha, ka dibna la rakibo biyaha ka dib marka si adag loo xiro putty, ugu dambayntiina la isku dayo in la simo oo la helo xaqa.
3 / Maydha: arafice biyo qabow iyo kulul oo leh tuubbo tijaabo ah si loo helo heer, cabirka cabirka qaybta gaaban ee lagu rakibay madaxa madaxa ka dib qubayska maarta marinka saliida macdanta, duub oo adkee lowska, oo lagu dhejiyo gidaarka kadib tuubbada sare ee maarta ah ee lagu rakibay dekedda, oo ugu dambeyntii lagu hagaajiyay derbiga iyada oo looxayo alwaax ah.
Musqusha: marka hore hubi tuubada dhulka hoostiisa mareysa, isku toosi afka tuubada ka dib markaad calaamadeyso calaamado fiican, godad feeraha, ka dibna sintir putty set good pad pad fur fur nuts. Qaybta dambe ee haanta biyaha laba god oo dhinac ah si aad u samayso calaamado fiican, feedh daloolka oo gal aaladda oo si adag u marooji. Ka dib markii aad nuts ku xoqdo gadaasha taangiga, ku dheji taangiga gadaashiisa xusulka, ku dheji siddeed albaab, foorarsiga nalka oo geli albaabka qalajiyaha iyo siddeed albaab.
Socodka socodka guud ahaan dayactirka
1 / Samee barnaamij: Dayactirka qeyb ka mid ah musqusha, waxa ugu horeeya ayaa ah in la xaqiijiyo mashruuca duminta iyo dayactirka qeybta kordhay ee goobta, waxaa ugu wanaagsan in xirfadlayaasha guriga laga daawado, iyadoo kuxiran xaaladaha goobta iyo baahiyaha milkiilaha si loo ogaado mashaariicda duminta iyo dayactirka. Dadka qaarkiis waxay u baahan yihiin oo keliya inay sameeyaan dayactirka derbiga, ka dibna taayirada dhulka ayaa laga tagi karaa oo lama taabtaan. Dadka qaarkiis waxay rabaan inay dayactirka oo dhan sameeyaan, qaarkoodna xitaa waxay rabaan inay dhaqaajiyaan gidaarka bannaanka ee musqusha, bedelida booska si uu u weynaado ama uga yaraado, ama u sameeyo kala-qoynta iyo qalalan. Kuwaas oo dhan waxay u baahan yihiin in lagu xukumo goobta si loo arko inay ku habboon tahay in la sameeyo iyo in la qaban karo. Kadib adoo fahmaya caadooyinka milkiilaha, go'aaminta bilowga ah ee alaabta guriga ku shaqeysa iyo isku xidhka daloolka godka musqusha, ayaa go'aamiya barnaamijka bilowga dhismaha iyo cusboonaysiinta.
2 / Burburinta difaac hore: Haddii waddo marinka ah ee bannaanka musqusha la haysto, dacwadaha dusha sare ee gudaha, iyo sidoo kale ballaarinta musqusha oo u dhiganta sagxadda qolka dhinaca kale ee derbiga, waa inay qabtaan shaqo wanaagsan oo ah tallaabooyinka ilaalinta si looga fogaado waxyeello u geysta dhulka inta lagu gudajiro garaaca iyo burburka, qabashada lebenka qashinka. Difaaca xirfadeed ee dabaqa waxaa loo dhigi doonaa seddex lakab, marka hore, lakab ka mid ah filimka difaaca xumbada gaarka loo leeyahay ee Panasonic ayaa la dhigayaa sagxadda, lakab warqad jiingado ah ayaa lagu darayaa dusheeda, iyo ugu dambeyn lakab ka kooban sagaal heer waa la dhigay. Saddex lakab oo difaac ah si loo hubiyo in dhulka ku jira geedi socodka dhismaha aan waxyeelo lahayn.
3 / Burburka dhismihii hore: ka dib marka la dhammeeyo tallaabooyinka ilaalinta, ugu horreyntii, tas-hiilaadka musqusha, qaansooyinka dhammaantood waa la saaray. Looma isticmaalin in la nadiifiyo, weli waxaa jira qaansooyin la isticmaalay oo la dhigay meel go'an oo lagu ilaaliyo. Marka xigta waa adeegsiga dubbe koronto iyo qalab kale oo xirfadle ah si meesha looga saaro saqafka, marmarka gidaarka, marmarka dhulka. Haddii qaabka boosku is beddelay, gidaarka u dhigma waa laga saarayaa oo gidaar cusub ayaa la dhisayaa. Musqusha darbi cusub oo wastaad ah, si looga hortago daadashada hoosta, habka rasmiga ah waa dhererka ilaa 375px oo ka saraysa dhulka sibidh si loo dhiso dogob dhulka biyuhu xireen, ka dibna leben la dul saaro.
4 / Shaqooyinka qarsoon: cusbooneysiinta musqusha si loogu daro tiro cayiman oo fiilooyinka korantada, tuubbo, ama godadka hore ee furayaasha si ay u sameeyaan waxoogaa barakac ah, si ay ula kulmaan qaabka cusub ee caadooyinka isticmaalka dadku. Si loo hubiyo tayada shaqooyinka qarsoon iyo adeegga iibka kadib, badanaa waa lagama maarmaan in la calaamadiyo goobta ay khadadka hore iyo kuwa cusub ay ku xiran yihiin baaldiyo maran ama godad cusub. Xaaladaha dhibaatooyinka, way fududahay in la helo qodobbada dhibaatada leh markii la dayactirayo. Xulashada fiilooyinka, dhuumaha biyaha, waxaa ugu wanaagsan in la mideeyo isticmaalka fiilooyinka Panda, dhuumaha biyaha ee Pilsa iyo noocyada kale ee caanka ah, si loogu ciyaaro injineerro qarsoon oo hoose.
5 / Heerarka biyuhu: ka saarida darbiyada lebenka iyo sagxadaha iyo darbiyada cusub, dusha sare ee sibidhka, qalaji iyo burush laba jeer daaha biyuhu ka galaan. Ka dib marka lakabka biyuhu ka dhammaato, waxaad goglan kartaa dusiyeyaasha derbiga cusub, iyo rakibidda saqafka, oo ah midka ugu dhow dhulka ee wareegga marmarka derbiga marka hore aan la dhejin. Intaa ka dib, dhulka musqusha si loogu maro tijaabo gaar ah oo aan biyuhu ka hortagin, taas oo ah, dabaqa musqusha oo ku lifaaqan, laguna duray heer biyo ah, calaamadee. Noqo 24 saacadood ka dib si aad u fiirsato haddii heerka biyuhu is beddelayo, si loo hubiyo in lakabka biyuhu ka soo baxaan ee aan lahayn wax daadanaya, oo qalajiyo ka hor inta aan leegga la goynin.
6 / Nadiifinta rakibaadda: Ugu dambayntii, rakibidda alaabada fayodhowrka, qalabka iyo qalabka sida musqulaha, albaabbada qubeyska lagu qubeysto, musqulaha, musqusha, iwm. Nidaamkani wuxuu ku lug leeyahay qoditaanka godadka derbiga, sidaas darteed shaqaalaha heerarka dhismaha ayaa u isticmaali doona warqadda Mareykanka inay ku calaamadeeyaan khadadka mashruuca ee la qariyey ee asalka ah, si aan loo dhaawicin khadadka tuubooyinka inta lagu jiro rakibida qalabka qodida. Dabcan, ha ilaawin inaad dhammaystirto shaqada nadaafadda goobta, si loo hubiyo in milkiilayaasha goobta ay nadiifiyaan oo nadiif noqdaan.
Hore:: Waan ka xumahay, Musqusha ayaa leh dhibaatooyinkan, ma ahan dhibaatooyin xagga tayada ah! Next: Sidee Loo Sameeyaa Haddii Qubayska Mar Kale La Xayiro? Ha degdegin! U Adeegso Si Aad uqubato… Mucjiso! Ku Degdeg Si Aad Ugu Sheegto Macaamiishaada!